अध्यक्ष रेग्मी पक्राउमा उद्योग बाणिज्य संघ रत्ननगर मौन किन ? – Saurahaonline.com
अध्यक्ष रेग्मी पक्राउमा उद्योग बाणिज्य संघ रत्ननगर मौन किन ?
चितवन , ९ जेठ । अध्यक्ष राजाराम रेग्मी प्रकाउ पर्दा पनि रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ मौन देखिएको छ । आफ्नो अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दा समेत सिङ्गो संघनै मौन देखिदा रेग्मीमको नेतृत्वमाथि कमजोरी देखिएको छ । जेठ ३ गते टिकौलीमा रहेको सडक बोर्डको दस्तुर संकलन केन्द्रमा हुलदंगा गर्दा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेग्मी बुधबार पक्राउ परेका हुन् ।
साधारण सदस्य रहेका रेवान सौराहाका अध्यक्ष पक्राउ पर्दा तत्काल रिहाईको माग गर्दै प्रेश बिज्ञप्ति निकालिए पनि अध्यक्ष पक्राउ पर्दा संघ मौन देखिएको छ । संघका उपाध्यक्ष अनिल कृष्ण श्रेष्ठले आँफुले अध्यक्षलाई प्रहरी मार्फत धरौटीमा रिहा गर्ने गरि सहमति भएको बन्दै बक्तब्य बाजी नगर्ने बताए ।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेग्मी बुधबार दिउँसो आफूलाई पक्राउ नगर्न आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। व्यक्तिगत नभई व्यावसयीको हकहिकतमा बोल्दा
अहिले सम्म संघले विज्ञप्ती जारी नगर्नु अध्यक्षको नेतृत्व शैली कमजोर भएको अनुमान गरिएको छ।